Nagu saabsan - Jinan Apex Makiinado Qalabka Co., Ltd.
Jinan Apex Makiinado Qalabka Co., Ltd. waa shirkad dhammaystiran oo u heellan soo saarista router CNC, mashiinka leysarka ee looxa, PVC, acrylics, biraha, dhagaxa, maqaarka iwm qalabka jarista ama xardho tan iyo sanadkii 2006, oo bilaabay inuu sameeyo caalami ah ganacsiga laga soo bilaabo sanadka 2016. Alaabtu waa kuwo caan ka ah gudaha iyo dibaddaba, suuqyada waaweyn ee daboolaya Yurub, Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika, Afrika, Aasiya, Dalal badan iyo meelo.
Dhammaan mashiinnada CNC waa inay maraan kormeer adag kahor keenista, iyo xirmooyin aad u heersar ah oo dhoofinta, kuwaas oo ku habboon badda, hawada, ama dariiqooyinka gaadiidka. Alaabtu waa inay codsadaan shahaadada CE, ISO, FDA haddii macaamiisha ay u baahan yihiin. Warshaddu waxay daboolaysaa 3000 mitir laba jibbaaran, oo ay ku jiraan R & D xarun gaar ah, loogu talagalay alaabooyinka cusub ee R & D, badeecadihii hore ee cusbooneysiinta, kuwaas oo u hoggaansamaya codsiga macmiilka OEM, ODM.
Waxaa jira ilaa 300 oo shaqaale ah, 10 khubaro injineernimo iyo 18 injineero farsamo ka mid ah, Ka dib sannado badan oo dadaal joogto ah iyo macaamiisha taageeraya ilaa maalmahan, waxay soo saartay qaab nidaam shaqo oo naqshadeynta, wax soo saarka, adeegga halbeegga ganacsiga ah. Macaamiisha cusub iyo kuwa hadda jira waxay ku sii fidayaan Koonfurta Ameerika, Bariga Dhexe, Koonfur-bari Aasiya, Afrika, Yurub iyo Degmooyin iyo goobo kale.
Saaxiibbada adduunka ku soo dhowow si ballaadhan ayey u soo booqdaan oo waxay filayaan taageero dheeraad ah fadlan. Mashiinnada mashiinnada mashiinnada 'CNC router' iibiyaasha oo dhan iyo kuwa loo qaybiyo ayaa adduunka looga baahan yahay sidoo kale. Waad ku mahadsantahay inaad ku xirmayso emayl, whatsapp, ama wicitaan.
Jinan Apex Makiinado Qalabka Co., Ltd.
Waxaan ku takhasusay mashiinka xardho, mashiinka laser, mashiinka goynta fiber indhaha iyo waxyaabaha kale ee la xiriira,
Waxaan nahay soo saare xirfadle ah CNC latheynta alwaaxa iyo mashiinka xardho. Waxaan ku iibinaynay alwaaxa CNC dalka Shiinaha ilaa sanadkii 2009 iyo dibada ilaa iyo 2013.
Mashiinkayagu wuxuu leeyahay dhammaan noocyada shahaado tayo leh, waxaan leenahay xariiq wax soo saar bisil, nidaam maareyn tayo leh oo dhameystiran iyo mid cilmiyeed, kooxda iibka oo aad u wanaagsan iyo kooxda adeegga iibka kadib.
Waxaan la jaanqaadaynaa falsafada ganacsiga "aaminaad iyo waxqabad leh, horay u sii soco" una aadno wadada guusha iyadoo la adeegsanayo adeegga iibka kaamil ah.
Waxaan ku iibinaynay Shiinaha latalada CNC ilaa iyo 2009 iyo dibada ilaa iyo 2013. Musqulahayagu sifiican ayay dunida oo dhan uga iibiyaan, sida Waqooyiga Ameerika, Yurub, Bariga Dhexe iyo dalal kale.
Ilaa hadda, mashiinnadeennu waxay ka gudbeen shahaadada CE, ISO iyo SGS. Waxaan leenahay khadka wax soo saarka baaluq, nidaamka maaraynta tayada sayniska oo dhameystiran iyo, koox iibin heer sare ah iyo kooxda adeegga iibka kadib.
Mugga dhoofinta sanadlaha ah
milyan yuan +
mitir laba jibbaaran